I-UnoFlat 307 - Ukunethezeka, ukunethezeka, ukuzilibazisa endaweni eyodwa! - I-Airbnb
I-UnoFlat 307 - Ukunethezeka, ukunethezeka, ukuzilibazisa endaweni eyodwa!
João Pessoa , Paraíba, i-Brazil
I-ifulethi elisevisiwe ephelele ibungazwe ngu-Josiane
U-Josiane Ungumbungazi ovelele
4.91 · 239 okushiwo abanye
I-Manaíra ingenye yezindawo ezaziwa kakhulu ezingomakhelwane e-João Pessoa futhi akumangalisi: ukuba seduze nolwandle kanye nenhlobonhlobo yezinsizakalo zomndeni wonke kukhuthaza inhlalakahle nenduduzo esimisweni.
Le ndawo inezinhlobonhlobo zezohwebo nezinkonzo ongakhetha kuzo, njengezimakethe, izinxanxathela zezitolo, izindawo zokudlela, amakhemisi, amabhikawozi, elondolo, izindawo zokucwala izinwele nokunye. Ngaleyo ndlela asikho isidingo sokuthi uhambe endaweni noma nini lapho udinga okuthile.
Indawo yakhona imizuzu nje ukusuka kukho konke okudingayo futhi ukufinyelela kalula emigwaqweni emikhulu yedolobha kungenye inzuzo enkulu yeManaíra. Ngaphezu kokumiswa yinxanxathela yezitolo enkulu kunazo zonke enhlokodolobha yaseParaíba ebizwa ngegama layo.
Unqenqema lwalo luzungezwe izindawo zokudlela zasolwandle, ama-ice cream parlors, amathilomu nemigoqo, ekhethwa phakathi kwezinketho ezinhle kakhulu zokungcebeleka edolobheni.
Woza futhi ujabulele le ndawo enelanga nefudumele, thatha ithuba lokuzikhulula ekupheleni kosuku lwakho lokusebenza, ujabulele impelasonto ngasolwandle noma ujabulele iholide ongasoze walibaleka !! Woza uzojabulela iManaíra!!
UJosiane Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- João Pessoa namaphethelo